မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: Jang Keun Suk နဲ့ ဝငျငှခှေနျ ပွဿနာ
အပြစ်မမြင်ပါဘူး ချစ်ချင်တာပဲသိနားလည်းP
အကိုရီးယားမှာတော့ စလစ်ဗျစ်တီတွေ ပြသနာတခုခုဆို လူတောထဲမသွားတာနဲ့ လူတွေ သူတို့ကိုမေ့အောင်နေကြတယ်
မြန်မာက စလစ်ဗျစ်တီတွေကတော့ ပြသနာ ဖြစ်လေ နာမည်ကြီးလေဆိုတော့ကား
မြန်မာ ပိတ်သတ်ကြီးက သဘောထားကြီးတာတော့ ကိုရီးယားတွေ ယှဉ်လို့ မမှီပါဘူးလေ
သူ့အပြစ်​မဟုတ်​ပါဘူး။ သူတို့ ကိုရီးယားက netizen ​တွေဆိုတာ မြန်​မာပြည်​က Facebook ​ပေါ်တက်​​နေတဲ့လူ​တွေလိုပဲ ​အလွယ်​တကူ အပြစ်​တင်​ဖို့ပဲသိတယ်​။
Korea ပရိတ်သတ် မဟုတ်သော်လည်း စိတ်ဝင်စားစွာ ဖတ်သွားပါတယ်..သနာူပါတယ်..ဘာမှ လဲ မဟုတ်ပဲနဲ့ 
@Anonymous: ဟုတ်ပါ့ ဟုတ်ပါ့။ ချစ်ချင်တာပဲ သိတာ... မြန်မာပြည်မှာ ဆယ်လီဖြစ်ချင်ရင် လူပြောခံရမဲ့ဟာတစ်ခုခုလုပ်လိုက်... နာမည်ကြီးပြီးသားပဲ။ Troll နဲ့ Scandal လဲ မကွဲကြဘူး။ Famous နဲ့ notorious လဲ မကွဲကြဘူး။
@Mady June: ကိုရီးယားက netizen တွေက မြန်မာ facebooker တွေလို အလွယ်တကူ အပြစ်တင်ကြတဲ့ဆိုပေမဲ့ သူတို့ပြောတာတွေက ဖြစ်ရပ်မှာပါဝင်သူကို တကယ် သွားထိရောက်တယ်။ ခုပဲ JKS လေး မပါရတော့တာကြည့်။ ခု Kim Hyun Joong လဲ စစ်ထဲဝင်တော့မယ်တဲ့။ သူပြန်ငြိမ်ရတော့မယ်လေ။ မြန်မာ အွန်လိုင်း သမားတွေက keyboard worriers တွေလို အွန်လိုင်းမှာပဲ သတ်မယ်ဖြတ်မယ်ပြောပြီး နောက်ကျ ပြီးသွားတာမဟုတ်ဘူး။
ဖေ့ဘွတ်က အစ်မ မေဇင်လား? ကိုရီးယား ပိတ်သတ်မဟုတ်ပေမဲ့ လာဖတ်ပြီး ခုလို တကူးတက မန့်သွားပေးတာ ကျေးဇူးကမ္ဘာပါ။
3/16/2015 7:01 PM
Sis, actress Song Hye Kyo lae ae di tone ka list hte mer par thay tel naw. Thu tot bar ma phit than ma kyar lite bu.
Ae lo pyaw lot thu ko ma like bu ma htin nae oo naw. Thu tot2yok lone ko arr kyi like :P
3/16/2015 8:13 PM
Song Hye Kyo က မနှစ်က ဖြစ်တာ... JKS နဲ့ တစ်ပြိုင်တည်းတော့ မဟုတ်ဘူး... ပြီးတော့ သူက မင်းသားလောက် မထိခိုက်ခဲ့ဘူး.
3/16/2015 8:17 PM
သူကကိုဟိုအရင်ထဲကကြိုက်တာ။ နောက်ပိုင်းသူ့ တွေက မကောင်းတာများလာလို့မ ကြည့်ဖြစ်တော့တာ။
3/16/2015 8:24 PM
Ae dar pyaw ter pot. Thu tot tway ka lae bat lite tel naw :(
ကိုယ်ဖန်စီဖြစ်တဲ့ပုံမျိုးမဟုတ်ပေမယ့် သူက ဖန်ဆားဗစ်တော်တော်ကောင်းတဲ့မင်းသားလို့သိထားတော့ သဘောကျတာပေါ့နော် ကိုယ်လုပ်နေတဲ့အလုပ်အပေါ် attitude ကောင်းတဲ့ မင်းသားအဖြစ် လေးစားမိတယ် အခွန်ကိစ္စကလဲ သူ့မှာအပြစ်မရှိဘူး တကယ်မပေးဘူးပဲဟုတ်ပါစေဦး သူသူကိုယ်ကိုယ် ရှောင်လို့ရရင်ရှောင်မှာပဲ သူ့လိုဝင်ငွေအရမ်းကောင်းတဲ့လူတွေမွေးပြီး အခွန်ကောက်စားတာက နိုင်ငံကြီးတွေရဲ့လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ငွေရှာနည်းလေ သူတို့အနေနဲ့လဲ ခက်ခက်ခဲခဲအောင်မြင်အောင် ကြိုးစားပြီးရလာတဲ့ငွေကို ပေးပေးနေရတဲ့အခွန်က တလုံးတခဲဆိုတော့နှမျောပေမပေါ့ ဒီကဘောလုံးသမားတွေဘာတွေဆိုလဲ လေးဆယ်ရာခိုင်နှုန်းအခွန်ပေးရလို့ အမြဲငြီးငြူနေကြတာကြားနေရတာပဲ ဝေဖန်တဲ့လူကတော့ရှာကြံပြောနေမှာပဲ မြန်မာပြည်က ပြည်သူတွေကို ဖေ့ဘုတ်မှာကလော်တုတ်နေကျ ကျာ်းပေါက်တို့ ယုန်လေးတို့ ဒါမျိုးအတုယူသင့်တယ် 2NE1ရှိုး ဝတ်မှုန်ရွှေရည်သွားကြည့်လို့ 'ကိုယ်လဲဆယ်လီ သူလဲဆယ်လီပဲ ကိုယ့်ကျသူကပိုက်ဆံပေးမကြည့်ပဲ သူ့ဘာလို့သွားကြည့်တာလဲ မကစ်ရယ်' လို့ ဖေ့ဘုတ်မှာ ကောမန့်ရေးတဲ့ နလပိန်းတုံးတွေလဲ သူတို့ဆယ်လီတွေ ဘယ်လောက် ပရိုဆန်တယ် နှိမ့်ချစွာအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာလေ့လာသင့်တယ် အမလေး မောထှာ
3/18/2015 1:56 AM
အရမ်းတော်တဲ့ မင်းသားလေးမို့ တော်တော်ကြိုက်တာ ... ခုနောက်ပိုင်း ကွာလတီရှိတဲ့ ကားတွေမှာ မတွေ့ရလို့ စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတာ ... အရည်ချင်းရှိသူမို့ တနေ့ ပြန်ထိပ်ဆုံးရောက်လာမယ် မျှော်လင့်မိတယ်
5/03/2015 3:06 AM